Fitantanana mangarahara: takin’ny CCO ny marina amin’ny volan’ny Covid-19 | NewsMada
Fitantanana mangarahara: takin’ny CCO ny marina amin’ny volan’ny Covid-19
Nahitsy ny eo anivon’ny Vondron’ny fiarahamonim-pirenena, CCOC amin’izao nandanian’ny depiote ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibola (LFI) 2022 izao. “Tsy voafaritra mazava ny sora-bola fandaniana tamin’ny Covid-19 sy ny Teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana (PSE) ka tokony hiadiana hevitra miaraka avokoa izany, hamaritana ny laharam-pahamehana”, hoy izy ireo, omaly.
Fividianana fitaovam-piadiana any Inde
Nanterin’izy ireo fa tsy nanome lanja ny LFI ireo depiote nefa tokony hadihadiana lalina sy ifanatonana izany. Notanisaina tamin’izany ny momba ilay volabe 446 tapitrisa Ar, hividianana fitaovam-piadiana any Inde. Ny fitaovam-pitaterana an-tariby “transport par cable’, tsy tokony ho laharam-pahamehana nefa iarahana mizaka sady tsy hahaleo ny sarany ny vidiny… “Nirotoroto ny fandaniana ny LFI. Tsy mazava ny volan’ny Covid-19, ny vola ho an’ny any Atsimo. Tsy mahafeno ny filana ho an’ireo minisitera telo ny vola amin’ny PSE”, hoy ihany izy ireo.
Vola hotantanin’ny ben’ny Tanàna
Notsindrin’ny CCOC koa fa tsy hita taratra ny nampitomboana ny vola fanampiana ny kaominina. “Tokony hamafisina ny mangarahara ary aoka hotantanan’ny ben’ny Tanàna izany vola izany (Ciad), fa tsy hosahanin’ny depiote. Misy tetibola tsy mazava koa ka tokony hoesorina na foanana”, hoy izy ireo.
Na izany aza, niaiky ny CCOC fa hita ny ezaka tamin’ny nampitomboana ny tetibola ho an’ny tontolo iainana, ny rano sy ny fanadiovana ary koa ireo minisitera misahana ny sosialim-bahoaka. “Tokony hanao ezaka isika hametraka paikady iarahana amin’ny mpiantsehatra rehetra ho amin’ny tanjona iombonana. Tsinjovina koa ny mangarahara ahitana ny lalan’ny vola sy ny vokatra andrasan’ny olom-pirenena…”, hoy ihany ny CCOC.